mairie-antananarivo – Famaranana ny fivoriana ara-potoana ny filankevitry ny tanàna (CUA)
Famaranana ny fivoriana ara-potoana ny filankevitry ny tanàna (CUA)
Nifarana androany ny fivoriana ara-potoana voalohan’ny Filan-kevitry ny tanànan’Antananarivo, izay natao nandritra ny 10 andro, notarihan’ny Filohan’ny Mpanolontsaina Monisipaly kolonely Faustin Andriambahoaka.
Nisy ny fandalovan’ireo Tompon’andraikitra mpanatanteraka isaky ny Departemanta tao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izay nilaza ny zavabita avy nandritra ny taona 2017 , teo anatrehan’ny Mpanolontsaina Monisipaly mba hisian’ny mangarahara. Nankatoavina tao ihany koa ny kaotim-pitantanana 2017 sy ny tetibola fanampiny amin’ny taona 2018, izany hoe ny ambim- bola 2017 nampidirina ao amin’ny tetibola 2018, izay natao hijerena fanatsarana hafa vaovao izay tsy tanteraka ny taona lasa. Ny fahatelo farany dia ny fanitsiana ny Rafitra an-tanantohatry ny avy ao amin’ny Departemanta misahana ny vola, mba ho maromaro kokoa ny olona amin’ny fanarahamaso ny fampidiram-bola sy ny fitsirihana, hahafahana mijery ireo kolikoly mety hitranga.
Tafiditra tao anatin’ny fivoriana ihany koa ny fanamarihana lehibe nataon’ny Mpanolontsaina mikasika ny fifanarahana amin’ny Easy Park, izay efa nisy teo alohan’ny nahatongavan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana teo amin’ny toerana ny fifanarahana tamin’izany. Tapaka tamin’izany fa tokony ho jerena akaiky ny fiarahamiasa eo amin’ny Easy PARK sy ny kaominina Antananarivo satria betsaka ny olona no tsy mankasitraka ny asan’izy ireo, ary tsy ekena intsony ko ny fanitaran’ny asan’ny Easy PARK na extension. Marihana fa araka ny lalàna dia amin’ny volana septambra indray vao afaka manao fivoriana manaraka ny Mpanolotsaina ny Tanàna.